मैले मिस गरेको ताराबाजी लै लै...
- अमृत बानियाँ
सुरुमै भनिहालौँ, यो लेखिनुपर्ने वा पढिनुपर्ने खास कुरा होइन । मेरो नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो । केही भोगाइ अरुसँग मिल्न पनि सक्छ वा नमिल्न पनि सक्छ । लेख्नुको एउटै कारण अव्यक्त नै राख्छु भनेर सोचेको कुरा मनमा उकुसमुकुस भयो र हल्का पार्न पोखेको मात्र हुँ । लेखाइको ज्ञान र शिल्प शून्य भएको मैले मन हल्का पार्न खोजेको मात्र हुँ ।
कुरा अघिल्लो बिहीबार अर्थात् १८ मंसिरको हो । बिहीबार मेरो सप्ताहान्तको बिदा । हप्ताभरिको कामको थकानका कारण बिदाको दिन प्रायः जसो ढिला उठिन्छ । अरु हप्ताभन्दा यो हप्ता अलि चाँडो उठेँ । केही किनमेलका लागि बजार जानु थियो । फ्रेस भएर साइकलमा १२/१५ मिनेट दूरीको मार्ट गएँ र आफूलाई आवश्यक किनमेल गरेर फर्किएँ ।
मोबाइल बिग्रिएर दुई दिनअघि मर्मत केन्द्रमा छोडेको थिएँ, त्यहाँ जानु थियो । बजारबाट फर्केपछि फोन गरेर जान्छु भन्ने सोचेको थिएँ, उतैबाट म्यासेज आयो- मोबाइल बनेको छ, समय भए लिन आइज । फोन गरेँ र ३० मिनेटभित्र आइपुग्छु भनेँ । तुरुन्त ट्याक्सीलाई फोन गरेँ र होस्टलको पाँचौँ तलाबाट तल झरेँ । फोन गरेको ५-६ मिनेटमै ट्याक्सीआइपुग्यो । ट्याक्सी चढेँ र ड्राइभरलाई लोकेसन कार्ड देखाएँ । ड्राइभरले नेभिगेसन अन गर्‍यो, लोकेसन सेट गर्‍यो र अगाडि बढ्यो ।
१५ मिनेट लगभगमा ट्याक्सी तोकिएको स्थानमा पुग्यो । बीचमा ट्याक्सी ड्राइभर एक शब्द पनि बोलेन । विदेशी यात्रु भेट्दा केही ट्याक्सी ड्राइभर कुराकानी गर्न रुचाउँछन्, कोही एक शब्द पनि बोल्दैनन् । र, बोल्नेहरू सबैले गर्ने कुरा प्रायः एकै प्रकारको हुन्छ । घर कहाँ ? कोरिया आएको कति भयो ? पैसा कति कमाइस् ? बिहे गरिस् ? बिहे गरेको भए छोराछोरी कति छन् ? स्वास्थ्यको ख्याल गरेर चोटपटक नलगाई होसियारसँग काम गर, पैसा धेरै कमा र आफ्नै देश गएर परिवारसँगै राम्रोसँग जीवन बिता । यस्तै हुन्छ ।
कोहीलाई नेपालबारे थाहै हुन्न भने कोहीले माउन्ट एभरेस्ट हिमालयबारे सोध्छन् । 'तँ हिमालय गएको छस् ?' भनेर प्रश्न गर्छन् । भाषामा त्यति पकड नभए पनि कुरा गर्न खोज्नेसँग जानेजति बुझेजति कुरा गरिन्छ । मोबाइल मर्मत केन्द्रअगाडि रोकेपछि ट्याक्सी ड्राइभरलाई आजसी (अंकल) ५ मिनेटजति यहाँ कुर्नुस्, म मोबाइल लिएर आउँछु, तुरुन्त फर्किहाल्ने हो भनेँ । उसले खुसीसाथ हुन्छ भन्यो (यसै पनि खाली फर्कनुभन्दा कुर्नु दोब्बर फाइदा थियो उसलाई) र ट्याक्सी छेउ लगायो । म पसलभित्र गएँ, मोबाइल हेरेँ, साउण्ड चिप बिग्रेर फेरेको थियो । फोन डायल गरेर चेक गरेँ, आवाज सुनियो । उसको खातामा लागेको मर्मत शुल्क ट्रान्सफर गर्दिएँ र कुरिरहेको ट्याक्सी चढेर फर्किएँ ।
यति सबै गरिसक्दा दिउँसोको २:३० बजिसकेको थियो । मैले बिहानको खाना पनि खाएको थिइनँ । भोक लागिरहेको थियो । खाना बनाएर खान समय लाग्ने भएकाले अघि बजारबाट आउँदा ल्याएको पाउरोटी मायोनायजसँग खाएँ र भोक मेटाएँ । अब खाना तत्काल नखाँदा पनि हुने भयो । सोचेँ, अब श्रीमतीलाई फोन गर्छु एकछिन र अलिक बेरपछि खाना बनाएर खान्छु । म्यासेन्जरमा फोन गरेँ, एक घण्टीमै फोन उठ्यो र उताबाट आवाज आयो- बाबा, फोन छोरीले उठाइन् ।
मैले फोन गर्दा होस् वा छोरीलाई बोल्न मन लागेर फोन गर्दा होस्, चार वर्षकी छोरीको फोनमा मसँग बोल्ने धेरै शब्द छैन । फोन गर्ने वा उठाउने, 'बाबा के छ ?' सोध्ने । म 'ठीक छ छोरी, छोरीको के छ ?' भन्छु, छाेरीले 'ठीक छ' जवाफ दिने । त्यसपछि म्यासेन्जरमा भएको इफेक्ट, इमोजी र ब्याकग्राउण्ड कलर फेरिफेरि जिस्कने । मैले जति प्रश्न गरे पनि, जे सोधे पनि बाल मतलब ।
ऊनको मुड चलुन्जेल फेरिफेरि इफेक्ट प्रयोग गर्ने र इफेक्टअनुसार हाउभाउ गर्ने । मैले पनि सोहीअनुसार छोरीलाई फलो गर्नुपर्ने । फलो नगरे वा छोरी यस्तो नलगाऊ भने कि त फोन तुरुन्त काटिन्छ, कि सुनेको नसुन्यै हुन्छ । ममीले 'छोरी खै मोबाइल देऊ त, म बोल्छु बाबासँग' भनिन् भने 'नो नो नो नो नो नो नोऽऽऽ, म बोल्छु' भन्ने हो । तर बोल्ने भनेको त्यही इमोजी र इफेक्टसँग रहर पुगुन्जेल जिस्केर रम्ने हो । एक हिसाबले छोरीको सत्ता चल्छ । हामी आज्ञापालक भएर छोरीले जसो भन्यो, त्यसै गर्न बाध्य हुन्छौँ ।
तर, आज अलि फरक भयो । फोन उठाएर छोरीले 'बाबा के छ ?' भनेपछि मैले सदाझैँ 'ठीक छ छोरी, छोरीको के छ' भनेँ । छोरीको 'ठीक छ' जवाफ आयो । मुसुक्क हाँसेर र पछिल्तिरबाट ममीको आवाज आयो, 'आज चाँडै फोन आयो त ?' 'आज बिदा हो नि त,' मैले जवाफ दिएँ । लगत्तै छोरीले 'ताराबाजी लै बाबा ताराबाजी लै' भनिन् ।
त्यसो त छोरीको मुड चल्दा कहिलेकाहीँ ताराबाजी लै लै..., कुखुरीकाँ..., वान, टू, थ्री, एक, दुई, तीन (नेपाली अंग्रेजी गणना दुवैमा १० सम्म) सँगै भन्ने गर्छौँ । तर, त्यो मौका निकै मुस्किलले प्राप्त हुन्छ । अँ ट्विङ्कल ट्विङ्कल लिटल स्टार, जोनी जोनी एस पापाहरू पनि हुन्छ, जुन मैले कहिल्यै पढिनँ र मसँगै गाउन पनि जान्दिनँ । म सुन्छु मात्र, छोरी गाउँछिन् । कहिले ठीकै हुन्छ, कहिले मैले सँगै नगाएकोमा छोरीको मुड अफ हुन्छ ।
तर, आज एक्कासि कताबाट 'ताराबाजी लै बाबा ताराबाजी लै' आयो ? म छक्क परेँ र ममीचाहिँलाई सोधेँ । 'पशुपति शर्माले गाएको गीत हेर्छे बेलाबेलामा, त्यही सम्झी होला अनि भनी नि,' ममीको जवाफ आयो । 'कुन गीत ?', फेरि सोधें । 'लौ ताराबाजी लै छोरी ताराबाजी लै गीत छ पशुपति शर्माको, हेरिस्या छैन ?', प्रश्नसहित जवाफ आयो ।
तुरुन्तै अर्को मोबाइलमा युट्युब खोलेर सर्च गरें- ताराबाजी लै लै... पशुपति शर्मा देखिएको भिडियो भेटेँ ताराबाजी लै छोरी शीर्षकको । करिब तीन महिनाअघि अपलोड गरिएको र ८० लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको गीत रहेछ । दुर्गा पौडेलको शब्द र सङ्गीतमा पशुपति शर्मा, शान्तिश्री परियार र बालगायिका आयुशा गौतमले गाएका रहेछन् ।
गीतको भिडियो प्ले गरेर मोबाइल छोरीतिर फर्काएँ । ११ मिनेटको गीत रहेछ । छोरी एक टकले मैले बजाएको भिडियो हेरिरहिन् । बीचमा १५ सेकेण्डको गुगल एड आएको बेला 'ममी हाम्रै मोबाइलमा हरौँ न, फोन काट्दिम ?' भनेर भनिन् । ममीले 'फेरि आउँछ, हेर न बाबाको मोबाइलमै, किन फोन काट्नु ?' भनिन् । एड सकियो, गीत फेरि बज्यो, फेरि छोरीको एकाग्र उस्तै । म एक शब्द नबोली छोरीको अनुहारमा हेरिरहेँ, छोरीतर्फ फर्काएको भिडियोमा खासै ध्यान दिइनँ । तर, गीतका शब्दहरू कानमा ठोक्किइरहे । म पनि कतै हराएँ, छोरीको एकाग्रसँगै । गीत सकियो छोरीको एकाग्रता पनि सकियो । 'ममी फोन राखुम् ?', छोरीले फेरि भनिन् । ममीको जवाफ आउनुअघि नै मैले भनेँ, 'ल ल अहिले राख, म खाना खाएर पछि फेरि गर्छु ।' पछाडिबाट ममीले 'हस्' भन्नेबित्तिकै छोरीले फोन काटिन् ।
म भने फेरि सोही गीत हेर्न लागेँ । छोरीलाई किन गीतले तान्यो, त्यो जान्नु थियो मलाई । पूरै गीत ध्यान दिएर हेरें । गीतको शब्दले भन्दा बढी भिडियोले खिचेको रहेछ छोरीलाई । त्यसो त गीतका सबै शब्दको भाव बुझ्न सक्ने उमेर पनि होइन । गीतको भिडियो बच्चाको मनोविज्ञान बुझेर सोहीअनुसारको भाव व्यक्त गर्ने गरी बनाएको रहेछ ।
पशुपति शर्मा, रञ्जिता गुरुङ र आयुशा गौतमले अभिनय गरेको गीतमा बाबुछोरी लुकामारी गरेको, छोरीलाई बाबुले देखेर पनि नदेखेझैँ गरेको, छोरीले बाबुलाई धाप मारेकाे, दसैँमा साथीको पिङ देखेर छोरीलाई पिङ चाहिएको, बजार जान लागेको बाबुलाई आमाले छोरीको पिङ हाल्न डोरी ल्याउनू भनेको, बाबुले छोरीलाई आफूसँगै बजार लगेर डोरी किनेर ल्याई पिङ हाल्देको, छोरीलाई बाबुले पिङ खेलाएको, दसैँमा छोरीलाई आमाबुबाले टीकाजमरा लगाइदिँदै 'छोरी सधैँ अहिलेजस्तै ज्ञानी हुनू' भनेको दृश्य सिलसिला मिलाएर खिचिएको रहेछ ।
पूरै भिडियो हेरिसक्दा छोरीले 'ताराबाजी लै बाबा ताराबाजी लै' भन्नु र गीतको भिडियो एकाग्र भएर हेर्नुको कारण बुझेँ । जसै गीत सकियो, मेरा आँखा पनि डम्म भएको थाहा पाएँ । गीतमा देखाइएको दृश्यसँगै म बगिरहेको रहेछु ।
छोरी जन्मेको ठीक ७५ दिनमा म वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया उडेको हुँ । त्यो ७५ दिनमा मैले १०-१२ पटक पनि छोरीलाई काखमा राखिनँ होला । एक त मलाई भर्खर जन्मेको बच्चा खेलाउन खासै रहर लाग्दैन । दोस्रो- सानो, लल्याकलुलुक हुने हुँदा र आफ्नो छटपटे स्वभावका कारण केही होला कि भन्ने डर लाग्छ । यही स्वभावले गर्दा आफन्तबाट 'के हो, यसो हाम्रो (उनीहरूको बच्चा जन्मिएको समयमा) बच्चा हेर्दा पनि हेर्दैन, हामीसँग रिस उठेको छ कि के हो ? हामीसँग रिस उठे पनि बच्चासँग त के को रिस होला ?' जस्ता कुरा सुन्नुपरेको छ ।
पाँच/छ महिनादेखि भने बच्चा खेलाउन मन लाग्छ । हाँस्नहाँस्न खोजेको, यताउती फर्कन खोजेको, हातखुट्टा फालेको देख्दा रमाइलो लाग्छ । तर, बच्चासँग धेरै झुम्मिएको चाहिँ छैन । मलाई मेरो स्वभाव नै बच्चासँग झुम्मिने खालको होइनजस्तो लाग्छ ।
अहिले छोरीले मैले खेलाउन रहर गर्ने समय पनि पार गरिसकिन् र खेल्ने समयमा पुगिन् । अब उनले नै बाबुसँग खेल्ने रहर राख्न थालिन् । तर, मेरो छोरीसँग खेल्ने र छोरीको मसँग खेल्ने रहर दुवै रहरमै सीमित भएको छ । न त म समय रोक्न सक्छु, न त यी रहर पूरा गर्न सक्छु । यी कुराहरू सम्झिँदा मनमा गाँठो परेर आउँछ । एकदमै गाह्रो हुन्छ । तर, आफूलाई आफैँले सम्झाउनेबाहेक अर्को विकल्प पनि त छैन । म जन्मिनुभन्दा २० वर्षअघिदेखि परदेश (भारत) हिँडेका मेरा बाबुले वर्षमा दुई पटक गरेर मुस्किलले ४५-५० दिन घर आउँदा प्यारले मलाई काखमा लिए वा लिएनन्, काँधमा चढाए वा चढाएनन्, मलाई थाहा छैन ।
काखमा लिए होलान्, काँधमा बोके होलान् । तर, कम्तीमा मलाई त्यस्तो सम्झना कहीँ कतै छैन । आठ भाइमध्ये जेठो हुन् मेरो बुबा । १७-१८ वर्षको उमेरमा परदेश हिँड्न सुरु गरेर ६० कटेपछि देश फर्केका हुन् । श्रीमती र सन्तानसँग रमाउने चाह थिएन होला भन्ने त पक्कै होइन । तर, नजिक हुँदा, बिदामा आउँदा पनि खासै घुलमिलको अनुभव बुझ्ने भएपछि पनि भएन ।
बुबाका अरु भाइहरू जो देशमै थिए, उनीहरूको पनि आफ्ना बच्चाहरूसँग खासै घुलमिल भएको नदेखेकाले पनि बुबासँग काखमा खेल्ने, काँधमा चढ्ने अवसर मैले पाइनँजस्तो अहिले लाग्छ । बरु बुबाहरू सबैको एउटै सोचाइ के थियो भने छोराछोरी बाबुसँग डराउनुपर्छ । जो जति डरायो, त्यति नै असल, अनुशासित र ज्ञानी । सबै बाबुहरू आफ्नो बच्चाको अघि बाघजस्तो घुरेर हेर्ने र चर्को डाँकोमा अरनखटन गर्ने गर्थे । नमाने पाउने सजायको हिसाब हुन्न थियो । थोरैतिनोमै सकिन्छ कि लम्बिएर हप्तौँसम्म सोही बहानामा पिटाइ दोहोरिरहन्छ ठेगान हुन्न थियो ।
सजाय र सजाय पाउने बहानाहरूको कुरा गर्ने हो भने अर्को कथा बन्छ । अहिले त्यता नजाऊँ । आमाहरूले जोगाउने सम्भावना शून्य हुन्थ्यो । जोगाउन अघि सरे दुवैले व्यहोर्नुपर्थ्यो । वर्षमा ४५-५० दिन घरमा आउने बुबाबाट मैले गाली एथेष्ट भेटे पनि पिटाइ नै चाहिँ भेटिनँ ।
छोराछोरी वा बच्चाहरूसँग गर्ने यस्तो व्यवहार मलाई आफू बुझ्ने भएदेखि गलत लाग्थ्यो । म मेरा छोराछोरीसँग कम्तीमा यो किसिमको व्यवहार गर्दिनँ भन्थेँ । छोराछोरीको पहिलो साथी बाबु, आमा र पाठशाला घर हो भन्ने सामान्य जानकारी म राख्थेँ र आफू सकेसम्म छोराछोरीसँग साथीको व्यवहार गर्छु भन्थेँ । यो कुरा म मेरा नजिकका साथीहरूसँग प्रसङ्ग आउँदा गर्ने गर्थें र अहिले पनि गर्छु । तर, सोचेको कुरा र यथार्थ सधैँ मेल खाँदो रहेनछ ।
ठीक आफूले समय दिनुपर्ने बेला म वैदेशिक रोजगारीका लागि हिँड्नुपर्ने अवस्था बन्यो । वैदेशिक रोजगारी मेरो बाध्यता वा रहर दुवै होइन । बाध्यता यस कारण होइन कि मलाई कसैले तँ विदेश जा भनेर पठाएको पनि होइन । म मेरो आफ्नै विवेकको निर्णयले आएको हुँ । देशमै दुःखसुख जीवन बिताउन सक्छु भन्ने लाग्थ्यो नै । रहर यस कारण होइन कि कोही पनि रहरले मजदुरी गर्न अर्काको मुलुक जाओस् ।
आफैँले उठाएको केही जिम्मेवारी र भविष्यका केही योजना पूरा गर्न केही सहज होला भनेर विदेशिएको हुँ । जिम्मेवारी पूरा होला नहोला, योजना पूरा गर्न सकिएला नसकिएला त्यो भावी दिनलाई छोडौँ । आज यहाँ भन्न खोजेको कुराचाहिँ मैले मेरो बाल्यकालको ताराबाजी लै लै त सम्झिन सकिनँ सकिनँ, छोरीसँगको ताराबाजी लै लै नबिर्सने गरी मनमुटुमा राख्छु भन्ने सोचेको थिएँ, त्यो पनि पूरा गर्न सकिनँ । एउटा अफसाेचचाहिँ कहीँ कतै रहिरहने पक्का भयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहने हामीहरूजस्ताले केही अर्थोपार्जन गरे पनि देश, परिवार र समाजबाट धेरै कुरा गुमाएका छाैँ । जुन कुरा जतिसुकै पैसाले पनि किन्न सकिँदैन । यसैमा एउटा प्रसङ्गकाे सम्झना आयो । वैदेशिक रोजगारकै लागि २०१२ मा म यूएईको आबुधाबी पुगेको थिएँ । त्यहाँ दुई वर्ष बसेर २७ जून, २०१४ मा यूएईको आबुधाबी यएरपोर्टबाट फर्कंदै गर्दा एक जना ४५ वर्ष नाघेका व्यक्ति जो बहराइनबाट बिदामा नेपाल आउँदै हुनुहुन्थ्यो, सँग उडान प्रतीक्षा गर्दै गर्दा भेट भएको थियो । छोटो भेटको कुराकानीमा उनले आफू विगत २८ वर्षदेखि बहराइनमा काम गर्दै आएको बताए ।
उनले राजधानीमा सुविधासम्पन्न भएको, थप जग्गाहरू र यथेष्ट ब्यालेन्स पनि भएको बताए । हरेक वर्ष डेढ दुई महिनाका लागि घर आउने, उताबाट आउँदै गर्दा अबचाहिँ फर्कन्नँ भन्ने सोचेर आउने तर घर आएपछि नितान्त एक्लो अनुभूति हुने हुनाले फेरि विदेश फर्कने गरेको सुनाए ।
उनले भने, 'भाइ, छनलाई श्रीमती, छोराछोरी, परिवार सबै छन् तर आत्मीयता नै छैन । वर्षमा एक पटक ४०-५० दिन घर आयो । श्रीमतीले पाहुनाजस्तो सोच्छिन्, छोराछोरी झन् नाता मात्र । न उनीहरू नजिकिन्छन्, न म नजिकिन सक्छु, फिलिङ्स नै आउँदैन आत्मीयताकाे । बच्चा बेलामा न काख न काँध, अट्याच्मेन्ट नै नभएपछि के गरून् उनीहरू पनि । अहिले त उनीहरू नै जवान भइसके । अब आफ्नै सर्कलमा रमाउँछन् । २८ वर्षभन्दा बढी भयो विदेश हिँडेको, आफन्त र छिमेकी लगभग बिर्सिसकेँ, pनीहरूले पनि बिर्से होलान् । न कुनै चाडबाडमा भेट, न मर्दापर्दा उपस्थिति, अनि त वास्तै नहुने रहेछ । त्यसैले अब फर्किन्नँ भनेर घर आउँछु, घरमै झन् एक्लो हुन्छु । अनि त बरु जान्छु उतै २-४ जना साथी छन् । सेवा, सुविधा, सम्मान र पैसा पनि उतै छ भन्छु फेरि फर्कन्छु । विदेशले मलाई पैसा दियो तर पैसाले आफ्नोपन र आत्मीयता भने दिन सकेन । अहिले नेपालमा बसेरै खान पुग्ने सम्पत्ति छ । नपुग्दो केही छैन तर पनि म विदेश नै गइरहेको छु । यो पटक पनि मनमा अब फर्कन्नँ भन्ने सोचेर आएको छु तर फेरि उस्तै होला । विदेश लत रहेछ भाइ । सकेसम्म नजानू, गए छोटो अवधिका लागि जानू र फर्केर देशमै सानोतिनो केही गर्नू । पैसापैसा भन्दै गयो, थाहै नपाई आफूबाहेक सबैसँग टाढा भइसकिँदो रहेछ ।'
उनले यति भनिरहँदा त्यतिबेला कहानीजस्तो लागेको थियो । अहिले सम्झिँदा अत्यास लागेर आउँछ ।
वैदेशिक रोजगारीले धेरै थोरै पैसा, सम्पत्ति र भौतिक सुख दिए पनि मान्छेलाई आफ्नै घरपरिवार र समाजबाट भने नितान्त एक्लो बनाएको छ । यो वैदेशिक राेजगारीकाे तीतो यथार्थ हो ।
अलि अस्ति मात्र सांसद गगन थापाले प्रारम्भिक बाल विकासविज्ञ तथा अभियन्ता डा. मिनाक्षी दाहालसँग कोभिडका कारण स्कुल जान बन्देज भएका बालबालिकाका बारेमा संवाद गरेका थिए । उक्त अन्तर्क्रियामा डा.दाहालले बालबालिकाको मस्तिष्क विकास गर्भावस्थादेखि नै हुने, उनीहरूले पहिलो ३ वर्षमा पाउने अवसर, पहिलो ५ वर्षमा पाउने अवसर र पहिलो ८ वर्षमा पाउने अवसरले जीवनभरि शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक स्वास्थ्य, आदिमा कस्तो मान्छे बन्ने हो भन्ने निर्धारण हुन्छ भन्नुभएको थियो । एकैछिन पनि ससाना बच्चाहरूसँग खेल्दिनू, उनीहरूजस्तै बन्दिनू, उनीहरूले भनेको मान्दिनू, यसले उनीहरूको वृत्ति विकासमा निकै ठूलो सकारात्मक सहयोग पुग्छ भन्ने उहाँको कुराको सार थियो ।
१० वर्षको उमेर अवधिलाई एउटा स्टेज मान्दा त्यो समयमा बच्चाहरूसँग जति नजिक भयो, उनीहरूको मानसिक विकासमा पनि सोहीअनुसारको प्रभाव परेको हुन्छ भनेर कतै पढेको थिएँ । ठ्याक्कै त्यस्तै हो होइन म जान्दिनँ । तर, १० वर्ष कुनै बच्चा आफ्नो बाबुआमाबाट टाढा भयो भने त्यसपछि आत्मीय हुन नसकेको चाहिँ धेरै देखेको छु ।
करिब डेढ वर्षअघि छोटो अवधिको बिदामा जाँदा केही दिन केही समय छोरीसँग खेल्न पाएको थिएँ । साढे दुई वर्षकी छोरीसँग त्यतिबेला बिताएको छोटो समय मेरो मन मस्तिष्कमा अझै उस्तै छ । छोरीकी ममीका अनुसार त्यति बेलाका फोटोहरू ममीको मोबाइलमा हेरेर छोरी अहिले पनि सबै कुरा सम्झिरहन्छिन् । हाम्रो बाबा आएपछि चस्मा लाएर बाइकमा घुम्न जाने । कारमा (चन्द्रागिरि केबुलकार गएका थियौँ) माथि जाने । त्यहाँ नमस्ते गर्ने (भालेश्वर मन्दिर दर्शन गरेको) । आइसक्रिम खाने । यहाँ हाम्रो बाबाको बाइक राख्ने (छोरीको मामाघर जाँदा बाइक राखेको ठाउँ देखाउँदै) । अर्थात् छोरीलाई एकएक सम्झना छ त्यो छोटो समयको । अनि ममीलाई सोध्छिन् रे ममी बाबा कहिले आउने ?
ममी बाबा कहिले आउने ? भन्ने प्रश्न सुनिरहेकै हो । यही प्रश्नले कहिलेकाँही झस्काए पनि यसैउसै कुरा गरेर भुल्याइरहेको थिएँ मैले । तर, जब छोरीले ताराबाजी लै बाबा ताराबाजी लै गाइन् र किन गाइन् भन्ने कारण थाहा पाएँ, म लगभग यो हप्ता पूरै डिस्टर्ब भएँ । छातीमा केहीले बिझाएजस्तो, टाउकोमा कसैले थिचेजस्तो, हात गोडा बाउँडिएजस्तो भयाे । दैनिकी सबै ठीकै चलिरहेको छ, चलाइरहेको छु, र पनि कता के नपुगेजस्तो, के नभएको जस्तो । मैले जुन कुरा मिस गरिरहेको थिएँ (एक दुई जनासँग शेयर पनि गरेको थिएँ) छोरीले त्यही कुरा मिस गरेको ज्ञात भयो । त्यसले मलाई निकै विचलित बनाएको छ । अब यहाँको बसाइ लगभग एक वर्ष मात्र छ । अघिल्लो हप्तासम्म अब एकै वर्ष त हो भन्ने सोचिरहेको मलाई अहिले दिन नै वर्ष हुन थालेको छ । मैले चाहेर समयको बहावमा फरक पर्दैन, त्यो थाहा छ, तैपनि मन अत्यासिन्छ- कहिले सकिन्छ यो एक वर्ष ?
विदेश आएर जरुर मैले केही लाख अर्थोर्पाजन गरेँ । मैले कमाएको भोलि छोराछोरीकै शिक्षादीक्षा, पालनपोषणलगायतको जिम्मेवारीको खर्च हुने हो । तर, मैले मेरो बाल्यकालमा जे अनुभव गर्न पाइनँ, त्यही अनुभव मेरी छोरीले पनि गर्न पाइनन्, जुन नहोस् भन्ने मेरो उत्कट चाहना थियो । आज मैले यहाँ कमाएको केही लाखले छोरी र मेरो आफ्नै चाहना किन्न म असमर्थ हुनेछु । भोलि छोरीले कुनै दिन यो समयको सम्झना गरिन् भने मेरो बोली बन्द हुनेछ । त्यतिबेला मसँग जवाफका लागि जवाफ भए पनि म आफैँ उक्त जवाफबाट सन्तुष्ट हुन सक्दिनँ । एकै पटक दुवै सम्भव थिएन । एउटा अवसर गुमाउनै पर्थ्यो । मैले छोरीसँग बिताउनुपर्ने सुनौलो समय केही लाखमा साटेको छु । मनको एउटा कुनामा यो गाँठो जिन्दगीभरि नफुस्कने गरी परिरहनेछ । एक वर्षपछिको बाँकी समय कस्तो हुन्छ, त्यो भविष्यले देखाउला ।
अहिलेलाई 'सोचेझैँ जिन्दगी रैनछ छोरी' ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २६, २०७७, ०८:०९:००